Barika aliminioma mahazatra
misintona satroka satro-boninahitra
Satroka plastika aluminium
Ny tantaran'ny tavoahangy fitaratra any Sina
Nisy tavoahangy fitaratra tany Sina hatramin'ny andro taloha. Taloha dia nino ny manam-pahaizana fa tsy fahita firy tamin'ny andro taloha ny enta-fitaratra, ny fanadihadiana natao tato ho ato dia milaza fa tsy sarotra ny famokarana sy ny fanamboarana ny vera fitaratra taloha, saingy tsy mora ny mitahiry azy, ka mahalana vao mahita ...Hamaky bebe kokoa »
Inona avy ireo karazana satrony tavoahangy？
Fotoana fandefasana: Apr-30-2021
Tavoahangy fitaratra maro manohana satroka aliminioma, satroka plastika aluminium, satroka plastika, satroka fingotra PVC. Saron-javatra samihafa amin'ny firafitra sy fitaovana misy karazany maro, avy amin'ny akora matetika dia aluminium, kilasy PP ary kilasy PE. Ampiasaina amin'ny divay fotsy, divay voankazo, divay mena, ary fonosana ireto ...Hamaky bebe kokoa »
Fomba filalaovana kilalao amin'ny kaopy taratasy
Fotoana fandefasana: Feb-21-2021
Ny tena asan'ny kaopy taratasy dia ny mitazona sy misotro rano, fa ny kapoaka taratasy koa dia misy fampiasa hafa. Azontsika atao ny mampiasa kaopy taratasy hanaovana lalao vita tanana, toy ny lalao mozika, lalao ara-panatanjahantena, kilalao siantifika ary kilalao ankamantatra. Toa ny fahaizan'ny kaopy taratasy no tena betsaka! Toy ny voninkazo Hetezo t ...Hamaky bebe kokoa »
Tsy mihinana plastika isan'andro ianao. Ity ny zavatra ataony amin'ny vatanao
Mitazona ny fitoniana amin'ny hafanan'ny rano Na mangatsiaka na mafana, ny tavoahangy fitaratra dia afaka mitazona ny maripanan'izy ireo amin'ny ambaratonga azo antoka ary amin'ny fanaovana izany, dia miantoka koa fa tsy misy fatran'ny tsiro na loko avy amin'ilay kaontenera voalaza ireo. Rano fitaratra madio sy madio madio b ...Hamaky bebe kokoa »
Amin'ny ady ataontsika amin'ny fampiasana plastika dia maro amintsika no nivadika tavoahangy fitaratra. Saingy azo antoka ve ny fampiasana tavoahangy na kaontenera fitaratra? Indraindray, ny sasany amin'ireo tavoahangy fitaratra dia mety hiafara amin'ny fanimbana kokoa noho ny PET na plastika ihany, mampitandrina an'i Ganesh Iyer, mpampita rano voamarina voalohany tany India ...Hamaky bebe kokoa »
Maninona no malaza be ny satroka aluminium antsika
Fotoana fandefasana: Jan-13-2021
Ny vokatra malaza indrindra dia tsy afa-misaraka amin'ny kalitao sy ny hakanton'ilay vokatra. Ny kapila vita amin'ny aliminioma antsika dia vita amin'ny akora avo lenta. Taorian'ny fisavana ny masinina, ny sisa tavela dia akora tena tsara, avy eo mampiasa teknolojia famokarana mandroso ho an'ny fanodinana sy famokarana ...Hamaky bebe kokoa »